« Fianar reggae festival » : hahazo ny anjarany Antananarivo | NewsMada
« Fianar reggae festival » : hahazo ny anjarany Antananarivo
Hampiavaka ny « Fianar reggae festival », manomboka amin’ity taona ity, ny fidirany tsikelikely amin’ny maha hetsika iraisam-pirenena azy. Na any an-drenivohitr’i Matsiatra Ambony, aza ny ivon’ny hetsika, tsy ho diso anjara fa hahita fahafinaretana sy fahafaham-po ihany koa ireo mpankafy reggae eto Antananarivo.
Hiaka-tsehatra, etsy amin’ny Craam eny Ambohitsaina, ao anatin’ilay hoe “Fianar reggae festival à l’U”, ny sasany amin’ireo mpandray anjara toa an-dry Lewiky, miaraka amin’ny Voots Kongregation ary ny Mem’s Family. Ho avy koa ny tarika Black Nation avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Hahita zava-baovao, mozika vaovao ireo mpankafy reggae. Anio tolakandro no hanatontosana izany fampisehoana izany.
Tsy mifanalavitra ny mozika voizin’ireto tarika telo ireto, satria samy manome lanja ny reggae nefa mampifangaro izany amin’ny roots. Voatazona hatrany kosa ilay aingam-panahy, fomba fiaina sy fisaina “rasta”. Ny hanasongadina izany, rahateo, no tanjon’ny mpikarakara ny “Fianar reggae festival”.
Mikasika ny Black Nation, niorina tamin’ny taona 1994 ny tarika, tarihin’i Jean-Luc Mira, mpihira sady mpively ampongamaroanaka. Miainga amin’ny filozofia rastafaraï, izay efa niainan’ny mpanakanto mpanao reggae maro, toa an-dry Bob Marley, ny tarika, izay efa namoaka rakikira iray, tamin’ny taona 2008.